C/kariin Guuleed “Gudoomiyihii hore Gobolka Bay markii hore wuu aqbalay is bedelka lagu sameeyay” – idalenews.com
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay in is bedelka lagu sameeyay maamulka Gobolka Bay aanu wax muran ah ka taagneyn, isagoo meesha ka saaray hadal ka soo yeeray Gudoomiyihii hore Gobolka Bay C/fataax Geesey.
C/kariin Guuleed ayaa sheegay in markii dhowaan ay tageen magaalada Baydhabo ay la hadleen Gudoomiyihii gobolkaas, isla markaana markii dadka deegaanka ay la kulmeen dhaliilo u soo jeediyeen, isla markaana ay aqbaleen.
“Is bedelka Gobolka Bay Xukuumada ka sameysay wax muran ah kama taagna,markii aan Gobolka joognay Gudoomiyaha hore wuxuu si cad u aqbalay soo jeediya dadka deegaanka iyo dhaliisha maamulka u jeediyeen, anagana wuu naga ogolaaday is bedelka aan ku sameyneyno”ayuu yiri C/kariin Guuleed oo wareysi siiyay Laanta afka Soomaaliga ee VOA-da.
Wasiirka ayaa sheegay in dhaqanada Soomaalida la yaqaan marka qof xil laga qaado, uu muran iyo xaalado keeno, isagoo cadeeyay in qorshaha ugu jirto in maamulo u dhisaan dhamaan gobolada dalka.
“Waa iska taqaan Soomaalida ninkii meel laga qaado hadhow wuxuu keenaa daruufo iyo xaalado maalmo kadib”ayuu sii raaciyay hadalkiisa Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Gudoomiyihii hore Gobolka Bay C/fataax Geesey ayaa sheegay in aanu xilka ku wareejin doonin maamul dibada laga keenay, isagoo ku adkeystay in maamulkiisa ay soo doorteen dadka deegaanka, isla markaana uu ku wareejiyo maamul dadku soo doortaan.
Xukuumada Soomaaliya ayaa wada dadaalo ay maamulo ugu sameyneyso, iyadoo qorshaha maamul u sameynta uu hada bilow yahay, isla markaana la filayo in maalmaha soo socda is bedelo lagu sameeyo maamulada qaar.
Hay’adda Sirdoonka Maraykanka oo Saldhig ay Diyaaradaha Bilaa-duuliyaha ka hawlgalaan ku leh dalka Sacuudiga